Hlola i-Grand Bahamas - World Tourism Portal
Hlola i-Grand Bahamas
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili e-Grand Bahamas.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeGrand Bahamas
IGreater Bahamas iyisiqhingi seBahamas
Hlola i-Grand Bahamas ngohlelo lwayo lwe-ecNUMX lwe-6:
Ibhishi / I-Shoreline
I-Bahamas Dollars (BSD) ilingana ngenani ku-American Dollar. Imali yaseMelika iyemukelwa (kwesinye isikhathi noma incanyelwa) yonke indawo.
Intela yokuthengisa ayikho ku Bahamas. Imali kazwelonke iqoqwa ikakhulu ngamanani entengo angeniswa ezweni.
Izinto zamahhala ezinjengotshwala, amakha, nobucwebe zivame ukumangaza izivakashi ngokuba eqolo. Akujwayelekile, ngokwesibonelo, ukuthola ibhodlela lamafutha akho owathandayo ngemali engaphansi kwengxenye yalokho ongakulindela ukuyibuyisela ekhaya. Lokhu inzuzo nokusebenziseka lula kokuthenga kwamahhala.
IPort Lucaya Marketplace Sea Horse Road kuBell Channel Bay. Thenga umsebenzi wamahhala ezitolo ezingaphezu kwe-80 ezakhiweni ze-12 ezibheke i-Bell Channel Bay marina. Isigcawu siyisikhungo sePort Lucaya.
I-International Bazaar iyindawo yokuthenga ehlukaniswe yaba yindawo ehlukile ekhombisa ingxenye ehlukile yomhlaba. Sekukonke kuqukethe izitolo ze-90, izindawo zokudlela ze-13, nezitolo ze-6 zokudla okulula / zeqhwa. Kukhona nemakethe yotshani eduzane.
Izindiza Eziningi ziyatholakala.
Amatekisi ajwayele ukulinda izivakashi esikhumulweni sezindiza kanye nolwandle olwandle. Babizwa futhi ngocingo kalula. Uyacelwa wazi ukuthi ayikho into efana "nemali yesevisi", kwezinye izikhathi imali encane yemithwalo enkulu nezikhwama zegalofu kungenjalo ukhokha kuphela imali, nesiphu uma kufanele.
Izinto zokuhamba zomphakathi esiqhingini ziqukethe ama-minivans athwala abantu bendawo lapho. Ngokuvamile bagijimela cishe yonke imizuzu ye-15 noma kunjalo bavame ukulinda baze babe nomthwalo ophelele ngaphambi kokusuka. Amatekisi Namabhasi Omphakathi abhalwe ngokucacile futhi alawulwa nguhulumeni.
Amahhotela kwesinye isikhathi anezinsizakalo zawo ezivalekile eziya The Port Lucaya Marketplace.
Ukuqasha imoto, isithuthuthu, nokuqasha kuyatholakala kalula. Kodwa-ke xwayisa ukuthi imigwaqo iqhutshwa ngakwesobunxele futhi abantu bendawo bashayela ngamandla.
ILucayan National Park, Umqhele wamapaki ezwe amathathu kuGrand Bahama, iLucayan National Park ukuphela kwendawo Bahamas lapho ungabona khona zonke eziyisithupha zemvelo yesiqhingi. Kukhona emihumeni yokuhlola (kufaka phakathi enye yemigede emide kakhulu engaphansi kwamanzi emhlabeni; ukufinyelela kutholakala ngenkathi ethile njengoba imihume nayo isetshenziselwa ukulondolozwa), ibhuloho elihle lokhuni ngaphezulu kwesixhapho seMangrove, kanye nogu lolwandle oluhle olunamabhentshi atholakalayo picnics. Izivakashi ziyelulekwa ukuthi zingashiyi impahla zinganakekelwa, njengoba sekubizwa izinto zokubi.
Isikhungo Sezemvelo saseRand, ngaphandle kwedolobha I-Freeport. Vula i-9am - I-4 pm UMsombuluko kuya kuLwesihlanu (Kuvaliwe ngoMgqibelo nangeSonto) Le paki kazwelonke iqanjwe ngeJames Rand futhi yasungulwa njengesikhungo semfundo yezemvelo sokuqala ukulondolozwa kwendawo yaseGrand Bahama.
IPeterson Cay National Park, isiqhingi esincane esizungezwe yizixhobo ezisendaweni eyi-1 amamayela ukusuka ogwini oluseningizimu, siyindlela enhle yokuthatha uhambo / ipikiniki. Ifinyeleleka kuphela ngesikebhe, futhi izivakashi ziyalelwa ukuba zibambelele ezindaweni ezithile kude nezixhobo zamakhorali. Yonke impilo yezitshalo nezilwane ngaphakathi kwemingcele yepaki ivikelwe ngumthetho. Ukudoba, ukukhosela, kanye nokulimaza noma ukususa noma iyiphi ikhorali akuvunyelwe ngokuphelele. Ukulahlwa udoti nokushiya amalahle / ama-embers nakho akuvunyelwe. Thatha izithombe kuphela zishiya imidwebo yonyawo kuphela.
Yini okufanele uyenze Grand Bahamas.
UNEXSO Dive Center Royal Palm Way. I-UNEXSO inikeza imisebenzi yabo bobabili abanolwazi nabangewona ama-SCUBA abahlukahlukene. Ziphinde zinikeze izinhlobo ezahlukahlukene “zokubhukuda namahlengethwa” nakho. Eminye imisebenzi idinga ukubhaliswa kwangaphambili kosuku lwe-1.
I-Reef Oasis Viva Bahamas Dive Center, etholakala ngaphakathi kweViva Wyndham Fortuna Beach Resort ku-Churchill Drive nge-Doubloon Road. I-Reef Oasis yi-PADI 5 * Isikhungo Sokuthuthukiswa Kwabafundi neDive Club enikela ngawo wonke ama-Padi Courses kusuka kwabaqalayo kuze kube kwizifundo ze-Instructor. Nsuku zonke i-dives i-dives kumasayithi we-dives angcono kakhulu e-Grand Bahama, ama-novice kanye nabadlali abanolwazi. Banikeza ama-Tiger Shark Dives akhethekile eTiger Beach edumile futhi I-Caribbean I-Shark Dives eShark Alley / Abaqambi Bokungena.
IGrand Bahama Scuba e-Ocean Reef Yacht Club igxuma ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu nangoSunday ntambama. Banikeza futhi i-shark dive ethandwayo.
Umculo obukhoma nokudansa kuyatholakala ezindaweni eziningi. Amabhendi amaningi adlala ingxube yeBahamian "Rake 'n Scrape" namazinga aseMelika. Izinkundla zemicimbi zihlanganisa i-Count Basie Square ePort Lucaya, kusihlwa kakhulu, iBikini Bottom Bar eWilliamstown (eduzane nesiqiwi saseSiqhingini SaseSikebhe) ngolwe-Lwesine nangoMgqibelo, Isipiliyoni seTony Macaroni eTaino Beach, ngoLwesithathu nangezinye izindlela zangeSonto, naseSabor Restaurant endaweni yokuphumula yasePelican Bay ngemiGqibelo.
I-Pelican Point Adventure Co, iPelican Point, iGrand Bahama Island. Nikeza ukudoba okuqondiswa ngokudonsela umdlandla nokujikeleza okumsipha e-Grand Bahamas Island, kanye nohambo lokuhlwaya ngezinyawo, ukubuka kwezinyoni nokuvakasha kwe-eco.
I-Radisson Grand, iLucayan 1 Ulwandle Lamahhashi Olwandle. Itholakala esihlotsheni esihle seGrand Bahama Island, iRadisson Grand Lucayan inikeza izivakashi ikhwalithi enhle kakhulu. Inamagumbi nezivakashi ezingama-540 zokunethezeka, ezihlotshiswe ngesitayela esishisayo se-Art Deco esiphefumulelwe indawo, futhi sisebangeni elingamahektare angama-7.5 emabhishi esihlabathi esimhlophe. Izivakashi ehhotela laseGrand Lucayan zingathokozela isheduli yemisebenzi yansuku zonke, izifundo ezimbili zegalofu ezingama-18, Las VegasAmakhasino -style, izinsiza ze-spa namachibi amathathu okuzijabulisa elangeni. Izinketho zokudlela esizeni zisukela ekuhambeni okuvamile kuya ekuthengeni okuhle, nezinyawo eziyizikwele ezingama-90,000 zesikhala somhlangano zinikeza ukuhlelwa okuhle kwemishado nemicimbi yazo zonke izinhlobo.
I-Grand Bahama inikeza izinhlobo ezahlukene zokudla zomhlaba wonke ukunambitheka. Ukudla kwaseBahamian kwasendaweni kubandakanya ikakhulukazi ukudla kwasolwandle, izinkukhu noma ingulube, okuvame ukuthosiwe, okunamakha, noma okugobile, ngezinhlobonhlobo zerayisi nosaladi. Izinongo zisetshenziswa ngobuningi. Ukuthola okuyiqiniso, ukudla kwekhwalithi yaseBahamian ezindaweni ezivakashelwa kungaba ukushaya noma ukuphuthelwa, ngakho-ke ukubuza abantu bendawo abanomusa izincomo zabo siqu kuzohamba ibanga elide ekuqinisekiseni ukuthi amava wakho wokunambitha angakhohlwa.
I-Conch (uhlobo lwenqola enkulu yolwandle) kungukudla okuyi-Bahamian okuphekwe ngezindlela ezahlukahlukene. Izintandokazi zesiqhingi zifaka: isaladi yesigaxa, esifakwe ngosawolintshi futhi sikhonze kubanda; i-conch ephukile, enesineke futhi ethambile kancane nama-conch fritters, amabhola amancane we-batter-fried ejulile exutshaniswe ne-conch enamaminerali futhi akhonzwa ngosawoti wokucwilisa.
Hlola umthethosivivinywa wakho ngokucophelela. Ishaja yensizakalo ye-15% ifakiwe kwezinye izindawo zokudlela kanye nemigoqo. Uma kungenjalo ithiphu ejwayelekile ye-15% iyaziswa.
Amafutha enhlanzi afana nenguqulo yeBahamian yendawo eyosiwe izoso, ekhonza inhlanzi ethosiwe ngezitsha ezahlukahlukene eziseceleni.
Indawo yasePort Lucaya inezinhlobonhlobo eziningi zokuhlangenwe nakho kokudlela kuzo zonke izabelomali, ngaso sonke isikhathi sosuku.
Isiko laseBahamian liyabekezelela ukukhonjiswa komphakathi kothando phakathi kwanoma imiphi imibhangqwana ehilela ukusikisela nokusikisela okwenziwa ngokweqile kobulili. Uyacelwa, noma uyindawo enhle, ugcine lokho kusebe lolwandle nehhotela lakho. Zizwe ukhululekile ukubamba izandla nokuqabula nokuqabula.
Hlala ukhumbula lapho uthola i-Grand Bahamas ukuthi umbono wokuthi ukhukhulwe yizinyawo ngumuntu osendaweni enhle ungazwakala unothando kwabanye, kuyalulekwa kakhulu. Amadoda endawo ikakhulukazi avame ukuhamba emabhishi aseduze kwamahhotela, efaka abesifazane bangaphandle njengendlela yokuzilibazisa. Kubalulekile ukuthi ucansi oluphephile lwenziwe, njengakweliphi izwe.